Amanqaku kaHamzah Adil malunga Martech Zone |
Amanqaku ngu UHamzah Adil
UHamzah Adil ngumphathi wentengiso yedijithali e SwiftChat, usetyenziso lwencoko ephilayo eyilelwe ukunceda inkxaso kubathengi bakho kunye namaqela okuthengisa.
Izinto ezi-5 ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokuSungula iwebhusayithi yakho ye-Ecommerce
NgoLwesibini, Juni 8, 2021 NgoLwesibini, Juni 8, 2021 UHamzah Adil
Ngaba ucinga ngokusungula iwebhusayithi ye-ecommerce? Nazi izinto ezintlanu ekufuneka uzithathele ingqalelo ngaphambi kokuba uqalise iwebhusayithi yakho ye-ecommerce: 1. Ngaba uneemveliso ezifanelekileyo Ukufumana imveliso elungileyo yeshishini le-ecommerce kulula ukutsho kunokuba kwenziwe. Ukucinga ukuba unciphise icandelo labaphulaphuli, ufuna ukuthengisa kulo, umbuzo olandelayo wento oza kuyithengisa uyavela. Zininzi izinto ekufuneka uzijongile xa usenza isigqibo ngemveliso. Kufuneke u
IPodcast yethu yamva nje